Iindaba - Ubomi bemihla ngemihla kwi-2020
Kwi-begining2020, ubhubhane omtsha utshabalalise ilizwe liphela, kwaye abantu bayanyanzelwa ukuba baphumle emakhaya. Inkampani yethu nayo yanyanzelwa ukuba iyeke umsebenzi kangangexesha elithile.
Ngo-Matshi, emva kokuba urhulumente ekhuphe umgaqo-nkqubo wokuqalisa kwakhona, inkampani yethu yaya ngokungxamisekileyo kwiinkqubo zokwenza umsebenzi kwakhona. Malunga nasekuqaleni kuka-Epreli, uninzi lwabasebenzi bethu babuyela emisebenzini yabo.
Ekuqaleni kokubuyela emsebenzini, onke amasebe enkampani yethu alungisa ngokungxamisekileyo iiodolo ebezingalungiswanga ngaphambili. Oogxa kwisebe le-odolo, isebe le-CAD, isebe lokusika, isebe eliqhubayo kunye nesampulu yesebe basebenza ixesha elongezelelekileyo yonke imihla. Ekugqibeleni, sayigqiba yonke iodolo kwaye sayizisa ngokukhuselekileyo.
Thina, Shijiazhuang Senlai Rhweba ngaphakathi & Rhweba ngaphandle, Ltd yinkampani enkulu enoxanduva, umgangatho yinto yethu yokuqala. Sisebenza ikakhulu kwizinto zokuhambisa abantwana kunye neemveliso zokunxiba zabantwana abatsha. Le nkampani iye koomatshini phambili. Umzi mveliso wethu ulawula ngokungqongqo umgangatho wemveliso yebhetshi ngokwenza iinkqubo zokuluka kunye nokudaya ukuqinisekisa umgangatho welaphu. Iimveliso zethu ziziva kamnandi, kwaye ziyahlangabezana nomgangatho we-nitrogen kunye neemveliso eziluhlaza ezingenasifo. Ngaphambi kwemveliso emininzi, umthengi kufuneka avume ubungakanani besampulu, isampulu yesitayile, umahluko wombala kunye nezinye iinkcukacha. Iqela lethu le-QC liya kuqhuba uhlolo ukusuka ekunitha, ukudaya, ukuhlolwa kwepateni ngaphambi kokusika, ukuvelisa, ukupakisha, ukuvavanywa kwesinyithi, amanqaku okuhambisa kunye nolunye unxibelelwano, kwaye ulawule ngokungqongqo umgangatho wezinto zokusebenza ukuqinisekisa ukuba iimveliso azinabungozi kwiintsana.
Inkampani yethu yahlulwe yangamasebe amaninzi, onke amasebe ayavana ngoxolo, xa kukho into esinokuyisombulula kunye, imeko yemihla ngemihla iyahambelana.
Inkampani yethu isebenza iminyaka emininzi, umgangatho uqinisekisiwe kwaye ixesha lokuhambisa lixesha. Sisebenzisene neenkampani ezininzi zangaphandle kwaye abathengi bethu banelisekile kakhulu ziimveliso zethu. Kwixesha elizayo, sijonge phambili ekusebenzisaneni neenkampani ezininzi.